Allgedo.com » Puntland iyo Maanta By Abdullahi Isim
Waxaa mudadan dambe soo if baxaya olole siyasadeed oo dardar iyo xawli ku socda, kuna wajahan degaanada iyo maamulka puntland, hal ku dhegyo dareen iyo dhiilo loogu gogol xaarayo, Burburin iyo Badbaadin. Balse war badniba ha ii ahaatee ka hor dulcuda qoraalka; Yaa badbaadinaya yaase laga badbaadinayaa puntland? Nuxurka qoralka waxaa halbeeg u noqon doona jawaabaha su’aalahan. Waxaa iga ah codsi ah in aqriste walba is weydiiyo ka hor gabagabada jawaabna meel sii dhigto. Ma dhabaa in Puntland qatar iyo burbur qarka u saaran tahay badbaadina mudan tahay maanta? Maxay tahay sabaabtu? Yeyse yihiin cadowgaasi? Qaymayntaada iyo qiyaasta aad siisay aqriste adigoo mahadsan jawaabtaada meel ku sii qor.
Puntland ma soo marin maanta maalin ay ka awood, karti iyo karaamo badan tahay intii muddo ah, Waxay halkaa ku soo gaartay hadana ku joogtaa Allaah, muwadiniin, waxgarad iyo hogaan rag iyo dumar isugu jira hadana jooga. Hadaba maxay tahay maanta qaylo dhaanta iyo masiibada indha sarcaadka ahi? fadlan, mar kale jawaabtaada meel ku qor?
Ma kuu muuqdaa dariiq la mid ah kii lagu waayey qaranimaddii Soomaaliya? ka dib markii ummadda soomaliyeed madax iyo mijaba ay shaqo ka dhigteen, isuguna geeyeen muruqooda iyo maankooda abaabul iyo irdho gelin mid waliba inta uu ka gaaro ama awoodo.
Dadaalkuna noqday duminta iyo dilka, daryeelna looga dhigay isha ka fiiri masiibada dhici doonta; Balse aan qofna is weydiin iskaa daa dan iyo waajibe meesha uu isagu ka gali doono iyo waxa xalku noqon doono midna. Waxaase markhaati ma doonto ah markii doontii la wada saraa hirku dulmaray in dani run sheegatay, (nin daad qaaday xumbo cuskay). Maah maah iyo xigmad aad adigu dejisay maantana kugu mudici ah….halkaa ii dhig.
Puntland aan sadex u kala qaado:
1- waa maamulka iyo muxaafidka puntland oo aad iyaga marar badan ka dheehan karto hadaladooda burburinta puntland in ay qayb ka yihiin, Waayo, buun-buuninta iyo ka badbadinta xad dhaafka ah, waxay wax ka digaysaa wax aan wax ahayn. Waana fariinta maanta loo gudbinayo shaqsiyaadka iyo kooxah loogu yeero cadowga puntland ama mucaarad doqon ah, kuwaasoo aan magac, muuqaal, miisaan iyo mug midna ku lahayn bulshada dhexdeeda, waxay u noqonaysaa dhiiri gelin iyo geesinimo, masab iyo maamuus aysan mudnayn. Waxayna ka dhigaysaa maamulka iyo muxaafidka puntland kuwo ka barbar dagaalamaya ama la meeqaan ah kuwa aad ugu yeerteen cadowga puntland. Sababtoo ah waxaad ku abuuraysaan umadda walwal iyo cabsi, waxayna qalqal gelinaysaa nabada, hanaanka haykalka guud, deegaan iyo maamulba, horseedna waxay u noqon kartaa halkii la diidanaa. Anigoo aaminsan in ujeedadu inta badan tahay kheyr wax kaama dhimo ee shar u toog hay, ogoow, hadana, haddii adiga oo wanaag raba aad wado qalada u marto waa laba jeer qasaar.
Waxaan soo dhaweynayaa: Ku wacyi gelinta bulshada dareen caafimaad qaba iyo wadaniyad, baraarujinta dhalinyarada, barida iyo dareensiinta waajibka iyo xilka ka saaran naftooda, umadooda iyo dalkooda, midkasta oo jecel wanaag. Waxaan soo dhaweynayaa in umada loo shaqeeyo oo ay helaan waxa ka maqan xaqana ay u leeyihiin. Waxaan soo dhawaynayaa masuuliyada, danta iyo cadaalada. Midnimada umada iyo qaranimada soomaliyeed oo ah waxa aan aaminsanahay. Waxaan ka digayaa xad dhaafinta iyo in wax walba lagu qiimeeyo miisaanka ay leeyhiin, marwalbana mudaanta la siiyo Sharciga. Ballanteenu ha ahaato xumaan doonimayno, wanaagna diidimayno.
2. Shaqsiyaadka iyo kooxaha sheeegta mucaaradka, waxaan leeyahay, mucaaradnimada macnaheedu ma ahan cadowga puntland inaad noqoto, macnheedu ma ahan in aad degganida iyo xasiloonida ku tumato ama diido dastuurka iyo jirtaanka puntlannba. Ma ahan qori dableh ayaan wataa, waa duminayaa iyo dilayaa.
Waxaan qabaa mucaaradku waa kan muujiya dulduleelada siyaasadeed iyo baahida loo qabo iyo weliba tilmmaamaha khaladka jira iyo sida ugu haboon oo lagu sixi karo. Balse waxaan arkaa gar ku gawracan (libaax nimaan aqoon baa neef ka rita).
Waxaan leeyahay maya, Soomaliya gaar ahaan shacabka reer puntland aqoon iyo waayo aragnimo ku filan ayey u leeyihiin shaqsiyaadka iyo ururada ka jira soomaliya iyo puntlandba, cabirka iyo culayska ay leeyihiin, hadday tahay faa’iido iyo haday tahay khasaaro.
Masuulka waa la eedayn karaa, lala xisaabtami karaa, waana la mucaaradi karaa marka uu dembi iyo xadgudub ka galo masuuliyadii ummadu u dhiibatay. Maxaase waajib ah? waa in ay tahay run, sharci, iyo masuuliyad umadeed, taas oo ah xaqsoor iyo cadaalad. Go’aan qaadashadu waa in ay ka timaadaa aragtida inta badan ee leh garaadka iyo gudoonka umada. Waa in ay leedahay qorshe iyo nidaam loo dajiyey oo faa’iidadii ka muuqato umaduna ku qanacsan tahay oo dhanka wanaagsan ah, waaqici ah, meel loo dhaafana aan lahayn. Weliba marka la qaymeeyo xaaladaha maanta ka jira dalkeena hooyo u baahan in 2 iyo 3 jeerba si taxder leh looga fakaro talaabo walba. waayo in hadii si sahlan wax ku xumaadaan aan xal gacan kuugu jirin xamar ha kuu sheegto.
Waxaan arkaa in, in badan oo mucaarad sheeganayaa, in aysan xataa intaa ku baraarugsanayn , waxayse garanayaan dibin daabayada dadka iyo dalka. Ma isweydiisay marna waxa ku qabsoomay, goolasha iyo guulaha dhaxal galka ah ama horumar aad ugu soo hoyseen naftiina ama umada soomaliyeed, hawlgalkii 22dii sanno ee la soo dhaafay socday. Soo ma haboona in aad markan tiraahdo xalku meel kaluu jiraa oo xeerkan mid xisaabtu ku shaqaynayso mahan. aan ku daro dani waa seeto.
Maanta waxaad ogaataan in ay arrintu taagan tahay xisaabtan iyo i tus oo itaabsii, taas oo macneheedu yahay maskaxda iyo masuuliyada qaawan ee dulmiga iyo dandarada xambaarsan iyo weliba wax qabadka ka muuqda shaqsiyaadka iyo kooxa sheegta mucaaradka ma noqonaso mana noqon doonto halkaad ka dayeysaan ee dariiq kale doona.
3. Shacabka muwaadiniinta ah ee reer puntland Waxaan leeyahay karaamadiina, dadkiina iyo deegaankiinaba adinkaa leh masuuliyadeeda haday abaar iyo haday tahay aaran, dawladina waa shacabkeeda, shacabna waa dawadiisa, maanta maalini kaagama horeyn.Yaan belo harga beena idiin jafin. Abwaan aan sugaantiisa aad u jeclaa Allaah ha u naxariistee ayaan ka hayaa “(Shaatigaaga duugga ah waa dillaacsanyee tuur dantu kuma faraysee dib u sii karkaro bay doodani ku leedahay)”, anna waxaan ku darayaa (isku duubnidaadiyo difaacaga oo mida ah ayaa dawadaada ah, nacabkana dilkiisa ah oo dar daarankeena ah), Balanteenu ha ahaato cadaalad diidi mayno dulmina dooni mayno.
Gunaanad mucaaradka iyo kuwa loogu yeero cadowga puntland waxaan leeyahay hogaanka maamulka iyo umada puntland mahan mid aad ku majara habaabin kartaan joornaal iyo maykarafoon. Mana aha mid aad ku maja-xaabin kartaan argagixisnimo, madaxna ugu noqon maysaan iyo sida hadda ka muuqata raadraacina. Ogaada maanta shacabku wax badan bay xog ogaal u yihiin. awooduna gacanta shacabka iyo maamulkooda ayey ku jirtaa, diyaarna waxay u ah yihiin difaaca dawlada iyo dalkooda waana dantooda, noloshooda iyo horumarkooda.
Maamulka puntland waxaan leeyahay awood idin hortaagan oo Puntland burburin kartaa ma jirto. yaan hooska laga didin oo harku bahal idiin noqon, mashaakilka puntland dhexyaala ma ahan mid dani keentay ee waa kalsooni daro. Sidaas iyo darteed, mar hadaan cadow wax u dhimi karaa jirin puntland haddii wax soo garaan, waxa wax u geysan karaa maanta dhib iyo dheefba waa shacabkeeda iyo maamulkeeda.